Guddiga Gurmadka Fatahaadaha Oo $180 Kun Kuwareejiyey Hirshabelle – Goobjoog News
Xubno ka socday guddiga qaran ee gurmadka fataahada ayaa waxay gaareen magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabellaha Dhexe, iyaga oo lacag dhan $180 Kun ay ku wareejiyeen maamulka Hirshabelle.
Xubnahan ka socday guddigan waxaa hoggaaminayey Xildhibaan Maxamed Cumar Ceymoy, waxaana lacagtaasi ay ku wareejiyey Cali Guudlaawe oo ah madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle.
Xildhibaan Maxamed Cumar ayaa sheegay in lacagtaan ay tahay mid loogu talogalay in wax loogu qabto dadka ay saameysay fatahaadda Wabiga Shabelle, waxaana sidoo kale lacagta la socday 2 kun oo maro kaneeco ah.
Waxa uu xildhibaanka sheegay in $100 kun loogu talogalay demada Jowhar, $50 Kun degmada Mahadaay iyo $30 kun oo ah degmada Balcad.
Dhanka kale, madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe ayaa uga mahadceliyey guddiga gurmadka qaran ee fatahaada lacagahan gurmadka ah ee ay soo gaarsiiyeen Hirshabelle, wuxuuna sheegay in sida loogu talogalay ay wax ugu qaban doonaan dadkii loogu talogalay.
Fatahaadda Wabiga Shabelle ayaa saameyn weyn ku yeelatay deegaanno badan oo ka mid ah gobollada Hiiraan iyo Shabellaha Dhexe.
Xildhibaannada Golaha Shacabka Oo Maanta Su'aallo Weydiinaya Wasiirka Waxbarashada